Last updated: Chivabvu. 23 2019 | 2 Maminitsi verenga
Rakaipisisa chikamu nezvokuva anonoka musi unouya chiso nechiso nemunhu anga vakamirira pamusoro pako. Nepo zvingava zvakaoma, Kutendeseka nguva dzose yakanakisisa itsika. Plus kana musi wako kunzwisisa zvechokwadi, iye / iye achakupa zvachose iwe kunobatsirei mubvunzo. pazasi, vari dzechokwadi zvikonzero zvishanu nokuti manheru kuti zuva.
Makambonzwa googled musangano nzvimbo kakawanda, nomusoro nzira, akasiya maminitsi mashoma mangwanani asi iwe uchiri vanonoka. Kana zvakanga kurema motokari kana waguma chiedza ose dzvuku, misjudging nguva chiri chikanganiso nokutendeseka kuti zviri nyore forgivable.
Kuti tidzivise kushandisa Suri, Ini kazhinji Google Map yangu kwavaiendeswa uye tora mufananidzo mirayiridzo ndisati kusiya. Nepo izvi rinobvumira zvakakodzera zuva gadziriro nguva, Ini zvakakodzera Haumbomuki akayambira apo ini mukangodzoka kana kupi chaizvo wangu kwavaiendeswa iri izvo kunokonzera nokunonoka. zvakare, kuva upfront nezvazvo kazhinji kunoita kuti nokuseka.
Havana kuwana kupaka
Kurarama guta kazhinji zvinoreva hapana kupaka. Nepo zvinenge kusarudza nzvimbo mukati kufamba daro, kazhinji, zvikuru mafaro musi mavara hazvisi nyore kufamba kure. In mumamiriro ichi, zvakanakisisa kuwana pedyo yokupakira mamiriro apo rekuona iwe zvipe nguva yakakwana kusvika nenguva nenzira.
Kuva chipfuwo anoda (pakutendeka musi wako zvakare), dzinovaraidza wako mwana wako. Nepo kuuya kumba kuchinja outfits pamberi zuva renyu uye wasangana yenyu dzinovaraidza inoita kuti pasi okunze, iwe muropa vari kuenda avanyaradze. Nepo izvi inonyaradza inogona kutora nguva refu kupfuura kutarisirwa, zvose iwe dzinovaraidza uchawedzera dzakazorora, kunyanya sezvo imi usiku kungava paya pane dzose.
Basa akamhanya kunonoka
Kubva misangano yapera kuti chine chokuita nezvakasikwa chirongwa vopedzisira varasika basa renyu, zvose zvinoitika kwatiri. Nepo nemanzvengero ichi dzechokwadi mabasa, nechokwadi chokuti zviri hakuna ikava tsika sezvo zuva enyu achaona kuti imi, basa iri kunotonyanya kukosha kupfuura ukama hwako.
Chero pembedzo yako, zvakakosha kuzivisa zuva rako kuti iwe uchava kunonoka. Kwete chete uyu akanaka wevaFiripi, asi zvinoratidza kuti muri nehanya munhu.
Sei Murume Jobho Inogona Pachena Chimiro chake Romantic
Matauriro Aungaita Vakadzi Kana Muri Shy?
How Zvokupfimbana Mumwe Kubva Dog Park